आफन्तले बिर्सिए पनि हामीले बिर्सिएका छैनौँ श्री ! – Nepali Digital Newspaper
आफन्तले बिर्सिए पनि हामीले बिर्सिएका छैनौँ श्री !
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 11 months ago August 11, 2019
नेपाली सिने–संसारका प्यारा अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको भौतिक शरीर यो संसारबाट विलय भएको (साउन २५ गते) पाँच बर्ष बितेछ । हामी त उनका शुभचिन्तक थियौँ र अझै पनि प्रशंसक हौँ । उनको चाहना नहुने कुरै भएन, सम्झना नआउने सवाल नै रहेन ।…
तर, आफ्नो नाम, पहिचान, स्वाभिमान र अस्तित्व सुम्पेर यो संसार त्यागेका श्रीकृष्णका ‘आफन्त’हरूले नै उनलाई आजको दिनमा स्मरण नगर्नु, उनको नाममा एक अक्षर पनि कतै केही नलेख्नुले यो पंक्तिकारलगायत श्रीकृष्णका सहकर्मी एवम् फ्यानहरूको मन पनि भारी भएर आएको छ ।
यिनै प्यारा अभिनेताले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र थियो भूमरी । त्यही फिल्ममा श्रीले बोलेको एउटा सम्बाद यतिबेला यो पंक्तिकारलाई याद आयो । श्रीले बोलेका थिए– ‘यो संसार स्वार्थले भरिएको छ । तपाईंले जे–जति गरे पनि अरूले त के आफन्तले नै बिर्सिदिनेछन् एकदिन ।’ कुनै दिन श्रीकृष्ण आफैंले अभिनय गरेको चलचित्रको दृश्यमा बोलेको यो सम्वाद आज उनी स्वयमको लागि सत्य सावित भएको छ ।
जीवनमा श्रीले के–के गरेनन् ? धेरै कष्ट ब्यहोरे, जीवनमा रोगका कारण धेरैपटक थला परे, तर पनि कलाकारितालाई त्याग्न सकेनन् । पर्दामा सकी–नसकी प्रस्तुत भएर दर्शकका लागि मनोरन्जन प्रदान गरे । आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुखद जीवन र भविष्यका लागि अनि सुखहाल घरजमका लागि खाई–नखाई घर–ब्यबहार जोडे । तर, अन्ततः त्यो अनुभूति गर्न नपाइकन यो संसार त्याग्न पुगे । लाग्छ, उनको भाग्यमा त्यो सुख, शान्ति र समृद्धि नै थिएन । उनको कलाकारिताको नाम, दाम, वजन र वाहवाही अरूकै लागि जोडिदिएका थिए उनले र, यो कुरा आज प्रमाणित पनि भएको छ ।
दुःखको कुरा… उनको बार्षिकीको दिन न त उनलाई उनका आफन्तले नै सम्झिए न त उनले कमाएर राखेको धन उनको सम्झनामा थोरै पनि उपयोग गरियो । यसमा हाम्रा प्यारा नायकको के दोष ? दोष त उनको नाम, शान, मान र सम्मानको आड र भरोसामा आफ्नो यात्रालाई सुख र हांसोका साथ अगाडि बढाइरहेका आफन्तहरूकै होइन र ?
औषधि खर्च गरेर पनि बच्न नसक्ने निश्चित भएपछि मृत्यु शैयामा छटपटाइरहेका श्रीले औषधीमा खर्च गर्न मानेनन् । श्वास छउन्जेल आश हुन्छ नि भन्ने मान्यतालाई पनि उनले मानेनन् र आफू यो संसारमा नरहँदा पनि आफूले माया गरेको मान्छेको जीवन सुखका साथ अगाडी बढोस् भन्ने हेतुले धन–सम्पतिको जोहो गरिदिए । आज उनले नै दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिले कसैको महल ठडिएको छ, चिल्ला गाडी कुदेको छ अनि ब्यापार ब्याबसाय जोड्दै फैलिएको छ तर, दुर्भाग्य ती आफन्तको मनमा श्रीको नाम र माया खुम्चिँदै गएको देखिएको छ । आफ्नो मान्छेको आयु लामो होस् भनेर ब्रत बस्नेले जीवनसाथी बितेको पाँच बर्षमा नै सम्झना गर्न छाड्छ भने त्यतिबेला प्यारा कलाकारका प्रशंसक, सहकर्मी र हामीजस्ता श्रीसँग धेरै पल बिताएका कलमजीबीहरूको मन कुँडिनु न्यायसङ्गत प्रसङ्ग होभन्दा यसमा दुईमत नहोला ।
मृत्युपछि मानिसको शरीर जल्छ, तर मन र अस्तित्व जल्दैन । उ जहाँ भए पनि उसले आफ्नो बारेमा भए–गरेका सबै क्रियाकलाप हेरिरहेको हुन्छ भन्ने मान्यता यदि सही हो भने श्रीले पनि आफ्नो बारेमा भैरहेका यी क्रियाकलापहरू पनि हेरिरहेका होलान् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । आफन्तले आज पाँच वर्षमा बिर्सिएता पनि श्रीकृष्ण हामी तिम्रा सहकर्मी र कलमजीवीहरूले तिमीलाई बिर्सिएका छैनौँ । हाम्रो यो वचन भावनामा हामी सधैंं अडिग रहने छौँ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली श्री…!